ओखर मानव स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । ओखरमा पाइने ओमेगा ३, ओमेगा ६ र अल्फा लिनोलेनिक एसिड स्वास्थका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । ओखरमा भिटामिन बी, भिटामिन ई, म्याग्नेसियम, जिंक, कपर, आइरन, क्याल्सियम अनि पर्याप्त एन्टि–अक्सिडेन्ट…
काठमाडौ । कुरिलो एक किसिमको वनस्पति हो । प्रायः सवैले कुरिलो चिनेको भएपनि यसको फाइदाबारे जानकारी नहुन सक्छ । नेपालको मैदानी जंगलदेखि हिमाली भूभागसम्ममा पाइने कुरिलोलाई आयुर्वेदले औषधीको रानी मान्छ । कुरिलो काँडा भएको र नभएको गरी दुइ…
काठमाडौं- के तपाईंलाई विर्सने समस्याले सताएको छ । बढी भूल्ने र विर्सने समस्या छ । छ भने तपाईको खान्कीमा पौस्टिक तत्वको अभाव रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मस्तिष्कको विकासको लागि केही खानेकुरा खान महत्व पूर्ण मान्छिन् । जसको नियमित…
तौल घटाउनका लागि पनि च्याउ खानुहोस्
काठमाडौँ । कयौ बिमारीका लागि च्याउलाई औषधीका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ ।आयुर्वेदिक डाक्टरहरुका अनुसार च्याउमा अत्याधिक मात्रामा खनिज र भिटामिन पाइन्छ । यसमा भिटामिन बी, डी, पोटासियम, कपर, आइरन र सेलेनियम पर्याप्त मात्रामा पाइने हुदाँ…
एजेन्सी । चिसो मौसममा टाउको दुख्दा अदुवाको एउटा टुक्रो लिएर सुघ्दा मात्र पनि आराम मिल्ने गर्दछ ।चिसो मौसममा बच्चा र बृद्धलाई दात दुख्ने समस्याले बढी सताउने गर्दछ । उक्त दुखेको ठाउँमा अदुवाको रस लगाउनाले दुखाईबाट तुरुन्तै आराम मिल्नेछ ।…
के तपाईं पनि त्यस्तै एक व्यक्ति हो, जसलाई चिया नभइ हुँदैन ? अर्थात् चिया धेरै पिउने गर्नुहुन्छ ? प्रायजसो चिया धेरै पिउने मान्छेलाई सल्लाह दिने गरिन्छ कि धेरै चिया पियो भने बिमार भइन्छ, कम गर ! तर, यहाँ हामीले चिया पिउने व्यक्तिका लागि…
इम्युनिटी अर्थात् रोगप्रतिरोधक क्षमता भनेको शरीरको टक्सिनसँग लड्ने क्षमता हो । यो टक्सिन ब्याक्टेरिया, भाइरस, फंगस, प्यारासाइट र अन्य हानिकारक पदार्थ हुनसक्छ । हाम्रो इम्युनिटी बलियो छ भने रुघाखोकीबाट सजिलै बचाउँछ अनि हेपाटाइटिस, फोक्सोको…
काठमाडौं— तुलसीको पातमा औषधीय गुणहरू भरपूर हुन्छन् । हिन्दूहरू घरमा तुलसीको मोठ बनाएर पूजा गर्छन् । हुन त तुलसी भगवान् श्रीकृष्णको प्रिय वनस्पति भनी चिनिन्छ र पवित्र मानिन्छ । तर यो बिरुवामा अनेकौं रोग निको पार्ने क्षमता भएकाले यसलाई पूजा…
भुइँमा बस्न छोडेको कति वर्ष भयो ? बस्न र खाना खान पनि तपाईं कुर्सीकै प्रयोग गर्नुहुन्छ, हैन त ? अब भुइँमा सुत्नुभएको छ भनी प्रश्न सोध्दा तपाईं हाँस्नुहुन्छ होला । पहिला हाम्रा पूर्खाहरू भुइँमा नै सुत्थे । तर हामी आधुनिक भनाउँदाहरू झुटो…
एजेन्सी । भारत, नेपाल लगायत मध्य पूर्वका विभिन्न परिकारहरुमा घिउको अधिक प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । अझ नेपालीहरुले त यसलाई स्वाद लिएर सिधै सेवन गर्ने गरेका छन् । परम्परागत रुपमा घिउ दूधबाट बन्ने नौनीलाई उमालेर निस्कासन गरिन्छ । बटर र…